Gear môtô amidy, fitaovam-pivarotana kely amidy, motor dc motor, maotera maotera hydraulic, vy vita amin'ny vy amidy, akora vita amin'ny vy amidy
K andiany Helical gear spiral bevel gear reducer (fikosoham-boto, fahitana tsara mifindra), motor motera Bevel dia karazana reducer gear helikoptera. Izy io dia motera fiasa manokana ho an'ireo mpisehatra samihafa. Ny fitaovam-piadiany dia manamboatra karazana fitaovam-pandrefesana Gleason quasi-hyperbolic, ary mafy ny mason-koditra. Manana fahaiza-miaina lehibe sy malefaka be izy io. Ny fiainana lava, ny fahombiazana ambony, fampiasa maharitra, sns, ny fampandehanana ny milina manontolo dia tsara lavitra noho ny môtô amin'ny cycloid reducer sy ny kankana ny «reducer motor worm», izay nampahalalain'ny mpampiasa azy. Ny motera misy kodiarana no entin'ny V-fehikibo. Ny môtô dia entin'ny fehikibo hampandeha ny ampahany amin'ny fidirana. Ny orinasa dia nasiana fehikibo V-fanao mahazatra. Rehefa mampiasa môtô mipoaka fipoahana dia tokony hampiasaina ny anti-statique V-belt (mpampiasa-fatra).
1. K series gear motor dia namboarina mifanaraka amin'ny fepetra ara-teknika iraisam-pirenena ary manana atiny siantifika sy teknolojia avo lenta.
2. Ity andian-tsofina mandeha amin'ny fiara dia mitahiry toerana, azo itokisana ary maharitra, ary manana fahafaha-miasa bebe kokoa, ary afaka mihoatra ny 200KW ny hery.
3, fanjifana angovo ambany, fampisehoana lehibe kokoa, fahombiazan'ny maotera motora hatramin'ny 95%.
4. K andian-dahatsoratra ho an'ny torolàlana ho an'ny kodiarana be dia be ny fanamafisam-peo, feo malefaka ary mitahiry angovo mahery.
5, safidio ny fitaovana 20CrMnTi tsara, ary aorian'ny fikarakarana sy fanodinana hafanana mandrehitra, ny fahatsaran'ny atiny dia mahatratra ny 58-62HRC, ny fanodinana nify, ny fahatokisana dia mety hahatratra ny 5-6, miaraka amin'ny famolavolana feno sy ny famonoana ny afo, ny fahatsinjovana ny atiny dia mahatratra ny XNUMX-XNUMXHRC, ny fanodinana nify, ny fahatokisana dia mety hahatratra ny XNUMX-XNUMX, miaraka amin'ny famolavolana sy ny famonoana famonoana mavesatra, ny fitrandrahana ny atiny dia mahatratra ny XNUMX-XNUMXHRC, ny fanodinana nify, ny fahatokisana dia mety hahatratra ny XNUMX-XNUMX, miaraka amin'ny famolavolana feno sy ny famonoana ny afo. Aina ela sy ny toetra hafa.
6. Aorian'ny fametahana masinina, ny môtô amin'ny làlan-tsolika izay mandrafitra ny motika, ny haingo bevel ary ny famoriam-baravarankely bevel dia manana karazana motera isan-karazany hamolavola elektrôzikaika, izay manome antoka tanteraka ny toetran'ireo vokatra moto.
Ny Sogears Motors sy Generator dia manolotra karazan-dahatsoratra azo itokisana sy avo lenta ary miaraka amin'ny motera elektrika sy mpamokatra dia natao hampiasaina am-pahatokisana na inona na inona karazana fandalinana. Ireo mpamatsy Sogears dia manome ny ara-dalàna ny fanomezana varotra, fanohanana, serivisy.
Salan'isan'ny hafainganam-pandehany: ny 5.36 ~ 197.37, K andiany / R andian-dahatsoratra dia mety hahatratra 32625
Olana tsipika: 200 ～ 50000 Nm
Lehibe herinaratra: 0.18 ~ 200 kW
Fanitarana K-shaft, fiakarana tongotra K-shaft
KF-shaft fanitarana, flange miakatra KAF-shaft napetraka, mounting flange
S- manondro fampidirana axis. Ity andiany ity dia mitovy amin'ny motor gear series S ary azo ampiasaina mifanisaka. Na izany aza, eo ambanin'ny fototry ny tahan'ny hafainganam-pandehan'ny hafa, ny hery sy ny laharana mitovy, ny tsipika famoahana ny andiany K dia lehibe kokoa noho ny toron'ny famoahana ny motera S series gear.
Ireo maodelon'ireo motera gear an'ny K series dia: K / KA / KAF37, K / KA / KAF47, K / KA / KAF57, K / KA / KAF67, K / KA / KAF77, K / KA / KAF87, K / KA / KAF97, K / KA / KAF107, K / KA / KAF127, K / KA / KAF157, K / KA / KAF167, K / KA / KAF187
1.Harbor sy fandefasana
2.Hoist sy fitaterana olona
5.Cement sy fananganana
6.Pretra sy jiro hazavana
7.Ny orinasa simika sy fiarovana ny tontolo iainana.Etc.
Fanasokajiana motera vorondrano
Ny motera fampihenana ny motera vakana dia azo zaraina ho an'ny nify mahitsy, nify mitsangana ary nify miforoka araka ny mariky ny tsipika nify; Ny nify vozotra dia mizara ho nify arc, nify cycloidal ety ivelany (antsoina hoe nify cycloidal) sy ny nify quasi-involute. Na dia somary lehibe kokoa noho ny nify mahitsy kosa ny nify hélikal, dia mora tohina ny fahadisoana, ka izany dia tsikelikely avy amin'ny nify vozotra. Ny fitaovan'ny vondrom-borona quasi-involute miaraka amin'ny hobs vita amin'ny tanana dia ambany noho ny fifaninanana miaraka amin'ny nify arc sy fitaovam-piadiana cycloidal noho ny fitaovana saro-takarina ary sarotra ny mifehy ny faritra fifandraisana amin'ny lohan'ny nify. Nesorina izy ireo ary tsy nampidirina tany Chine. Ity karazana milina fanodinana gear.
Mitadiava bevel ho an'ny helony motor motor ambiny 1/2 HP, 3/4 HP, motera elektrika 2 HP amidy amin'ny sogear mpamokatra marika malaza any Shina ary miaraka amin'ny 1/3HP Reliance Duty-Master Motor miaraka amin'ny tahan'ny Gear Reducer an'ny 40: 1. Ity andian-dahatsoratra maotera kely ity dia manana fampandrenesana 4kW-250kW momba ny fampitsaharana ny vokatra: Mampitsahatra ny varotra maodely K sasany amidy izahay. Miaraka amin'ireo motera AC nitaingina mivantana ny rafitra maotera maotera modely sogear dia mametaka kapila matevina ho an'ny fampiharana marobe.
Ny firafitry ny motera vorondrano dia ny fanitarana K-shaft, ny fananganana tongotra, ny fananganana KA-shaft, ny fanitarana KF-shaft, ny fanamafisana ny flange, ny fofonaina KAF-shaft, ny fanamafisana flange, KS- manondro ny fampidirana tsangambato Miandry,
Ny marika teknika amin'ny ankapobeny dia:
Ny heriny: 0.12KW ~ 200KW
Toroka: 10N · m mankany 58500N · m
Ny hafainganana famoahana: 0.08 ~ 263r / min
Ity boaty fanatanjahan-tena 10-120: 1 misy maotera mandeha amin'ny herinaratra ity dia misy maotera ambany ary manome hery sy hafainganam-pandeha azo ampitahaina amin'ny servo RC amin'ny ampahany kely amin'ny vidiny.
K series maotera helik-bevel motera, motera maotera AC vidiana ambany & motera torque miaraka amina boaty, 3, 5, 6, 200 21 karazan-javamaniry isan-karazany ho safidinao. Izy io dia manana herinaratra 20 KW sy tiro miisa 1350 rpm. Nohazavainay ny tsy fitovian'ny hafainganam-pandehan'ny maotera eo amin'ny motera AC sy DC sy ny fomba fanaovan'izy ireo torol. Miaraka amina boaty gearbox - izay fantatra amin'ny anarana hoe reducer gear na reducers hafainganana, dia misy motera elektrika, girara ary bearings ao anaty trano iray ary matetika ampiasaina amin'ny fampiharana izay mitaky herin'ny hery (tavy).
The motera gearika helikoptera, fantatra ihany koa ny reducer K-series, dia amin'ny endrika fampitana andian-dingana telo miaraka amin'ny andian-tsolika roa misy herinaratra ary fitaovam-piadiana bevelona. Ity karazana fifindrana ity dia manana fahombiazana avo lenta, fametahana ambony, lakozia avo, fahaiza-mitondra mafy ary malefaka ambany. Izy io dia mety mifanaraka amin'ny motor servo ary miasa miaraka amin'ny motera asynchronous intelo. Ny servo reducer helical gearuc reducer novokarin'ilay orinasa dia manana fiainana ela velona ary torolàlana lehibe.
Gear Motors dia vita amina maodely telo miaraka amina famindran-toerana manomboka amin'ny zana-kazo sy ny famolavolana nify namboarinay tsy manam-paharoa ary ny famandrihana moka dia manome fandidiana milamina sy malefaka amin'izay hery sy refy rehetra. Ny fanampiana dia misy foana avy amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa, ny varotra.
Nampiasaina tamin'ny milina sakafo, milina fanontana, milina metallurgical, tariby sy tariby tariby, milina conveyor, milina simika, milina fanaovana pirinty, milina sy milina fandokoana ary milina fitsaboana.
Ny marika sogear Gear Motors avy amin'ny Surplus Sales an'ny mpanamboatra mivantana. Motera AC sy DC, motera fitoviana, mifamadika, motera miakatra. 1.9 RPM 115 Volt AC 100 in-lb Sogears Gearmotor. Item isa: 5-1820-2 5 Ao amin'ny staoky. Vidio Gear Motor amin'ny vidiny mirary any Shina na India avy any Sogear. Fitaovana Geared Motors marobe ao amin'ny trano fitobiana, ny vidiny ambongadiny ary ny fandefasana maimaim-poana.
Ho an'ny Gearmotors an'ny sogear 'Sub-fractional. ny VFD vaovao ananantsika dia mamela ny fitaovana hoentina tafiditra ao anaty masinina izay hita matetika amin'ny hafainganam-pandeha hafainganam-pandeha. Motor & Gear Engineering, izahay no mpitarika kilasy manerantany amin'ny famolavolana, ny injeniera ary ny famokarana fitaovana sy hazo fisaka. Fivarotana sy fanamboarana motera elektrika sy fiara mandeha.
Ny reducer goavan'ny cycloidal dia manamboatra nify miforitra, ary mijanona foana ny haavon'ny nify amin'ny teboka tsirairay isaky ny tsindry indexing; ny spur, helical ary lelaire de reducer reducer dia mandany nify miforitra, manomboka amin'ny tendrony lehibe (faran'ny farany) amin'ny nify. Miaraka amin'ny làlan'ny bus indexing ka hatramin'ny farany (faran'ny farany) amin'ny nify, mihena ny haavon'ny nify.
Ny Sogears AC Gearmotors dia misy amin'ny torolàlana isan-karazany isan-karazany manomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 1827 in-lbs amin'ny zoro havanana sy ny zana-kazo mifanitsy amin'ny indostria. ny Gearmotors sy ny reducer hafainganam-barotra amidy eran'izao tontolo izao, New Oriental Motor 1/19 HP Single Phase Gearmotor. Inventory: GEA2049. Famaritana ho 1: 0. Mpanamboatra: sogears.
Ny môtô navelan'ny fampihenam-bidy mahitsy dia misy hery famoronana kely sy rafitra fanohanana tsotra; na izany aza, ny somary kisendrasendra dia kely, ny fahatsapana diso dia feno, ary ny tabataba dia lehibe. Ampiasaina amin'ny fifamoivoizana hafainganam-pandeha peripheral toy ny automatique automatique sy milina mavesatra matevina.
Raha ampitahaina amin'ny haingon-doko sy haingon-trano bevelona, ​​ny fitaovam-pandrika fantsom-borona dia manana mari-pahaizana lehibe, ary ny fantsom-pifandraisana eo amin'ny nify dia misy radiom-boasary somary lehibe; ny faritra ifandraisana amin'ny nify dia mora fehezina; izy ireo dia mora tohina ny lesoka. Noho ny haavo mitondra entana dia miadana ny fifindrana ary ambany ny tabataba. Matetika ampiasaina amin'ny fandefasana toy ny ivon'ny fiara isan-karazany, traktera ary angidimby.
1. Vokatra malefaka, firafitra matevina, fifindran'ny torapasika avo be eo amin'ny mason'ny nify mafy, haingam-pandeha ambony dia miantoka ny fiasa maharitra, ny tabataba ambany ary ny fiainam-panompoana lava.
4. Fomba fivoahana: famoam-bolo manjavozavo na famoahana shaft matevina, ny fahombiazana antonony dia 94%.
Amin'ny maotera horsepower lehibe kokoa, motera, motera maotera, ary reducer hafainganana môtô, azontsika atao ny manolo ny maotera 90V na 180VDC amidin'ny sogear, Rehefa miantso mpitantana varotra faritra sogears Electric ianao hamaly ny anao, dia hamaly izahay.
Sogears Electric Motor dia manam-pahaizana manokana amin'ny famarotana sy fanamboarana ny motera herinaratra, paompy, fampitana herinaratra, ary fitaovana indostrialy mifandraika.
Fampiharana motor motera bevel:
Miseho be izao ny rafitra fandefasana ireo milina isan-karazany, avy amin'ny sambo, fiara, lokomototra, milina mavesatra amin'ny fananganana, fitaovana fanodinana ary fitaovana famokarana automatique ampiasaina amin'ny indostrian'ny milina, ho an'ny mahazatra indrindra amin'ny fiainantsika andavanandro. Fitaovana an-trano, famantaranandro, sns. Ny fampiharana azy dia miainga avy amin'ny fifindran'ny herinaratra avo lenta amin'ny enta-mavesatra kely, fampitana ny vatan-java-misy marina ary amin'ny fampiharana indostrialy, ny motera misy maotera dia mihintsana ary mihamitombo. Noho izany, ampiasaina amin'ny fitaovana hafainganam-pandehan'ny hafainganam-pandeha sy haingam-pandeha izy io Ny motera ho an'ny voromailala dia fiara moto avy any ivelany izay tsy novokarin'ny ZBJ19004. Ampiasaina betsaka amin'ny metallurgy, fitrandrahana, fampisondrotana, fitaterana, simenitra, fananganana, simika, lamba, fanaovana pirinty sy fandokoana, farmasia sy ny sisa. an-tsaha.
Na dia 250 HP Electric Motors aza dia azontsika ampiarahina amin'ireo motera miaraka amintsika ary amidy. Amin'ny maha-mpamatsy motera manerantany antsika dia manolotra karazana AC Motors sy DC Motors isan-karazany izahay ao anatin'izany ny Traction Motors, Horizontal ary karazana mitsangana. Manatitra na aiza na aiza amin'izao tontolo izao avy any Shina, Sogears Direct dia manome ny fisafidianana tsara indrindra sy ny fahalalana momba ny motera elektrika, ny kojakoja, ny motera geard ary ny kojakoja hahazoana azy ireo izay ilainy.